Izitshixo zokufudukela kwiGeofumadas.com - i-Geofumadas
Gajes Ukungeniswa Geofumadas.com
NgoJanuwari, 2011 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Ekugqibeleni, isiseko sedatha siphathwe ngokugqithisileyo emva kokufuduka kwi-WordPress MU kwi-Cartesians kwi-domain egcinwe eCpanel. Ngenxa yoko, iiplagi eziliqela kunye nokufikelela kwi phpmyadmin ziye zandigcina ndonwabile.
Kwiintsuku eziliqela - no busuku - uze uze uhambe. Nazi ezinye iindlela, ngoko ndicinga ukuba ekugqibeleni ndikulungele ukubhala kwakhona.
Ukuze ube ngu-WordPress-mu-1.2.4 inguqu kwaye uhambise kwi-WordPress ye-3.0.4 version kukho izinto ezininzi ngendlela engazange i-export export / import.
Ukufikelela kwi-database kwakubalulekile, ukususa ubuncwane bezinto ezishiywe kwibhaksi ye-trash kodwa ngokukhawuleza ukuba azilahlwa, zenza ubunzima obukhulu. Ndabona ukuba nangona oko bekuphelile ugaxekile, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kuthatha kakhulu, kwaye ndivakalelwa kukuba kwiinguqulelo zinepaka ngenxa yokuba i-spam entsha.
Akismet Uncedo olukhulu, lusindisa ukususa ugaxekile kumagqabaza.
Ikhonkco lekhonkco elidibeneyo Kunceda kakhulu ukuchonga nokulungisa izixhumanisi ezingaba zikhoyo. Kuyinto ehlekisayo, kodwa ingayi kuhlaziya loo maqhagamshelwano yenza ukuba udidi lulahlekelwe yimimandla. Amaphepha angasaphila, atshintshe isakhiwo sawo, esenza ukuba izixhumanisi zabo zibe nobungane, amazwana ngamaglophu angavumelekanga, iimpazamo zeminwe, nokuba kunjalo. Uncedo olungundoqo lweplagin, kuye kwandinceda ukuba ndikwazi izinto ezininzi endibhalileyo kwaye ngoku sele ziphelile.
Iinguqulelo zangoku yokungena kwi-plugin Unenketho yokudlulisa imifanekiso yegalari kwi-domain entsha. Kodwa ngenxa yezizathu ezininzi ezingenakuza zonke, umzekelo ukuba zihleli kwenye i-domain, ezo zifikile, okanye imifanekiso eyafakwa kwisakhiwo ngaphandle kweyesiqhelo okanye ezo zincinci.
I-plugin iye yanceda kakhulu Yongeza Izithombe ezixhunyiwe kwigalari. Oku kwenza umsebenzi wokukhangela imifanekiso engangeniswayo kwaye ibenze nabo, ngokungenakudlalwa umzekelo ukuba baqaphele ukuba kutheni, ndandicinga ukuba mnandi kakhulu, ngoko ndandenza ngamacandelo, kodwa ndingazange ndidlule i-AutoCAD okanye i-Topography. Into epheleleyo kukuba kuba sele ndiyisebenzise indawo yokugcina kunye ne-click plugin ayikwazanga ukuyichazela. Ndabona xa ndifuna ukwakha ifolda entsha esuka kwiCpanel, ukuba umyalezo ubonakale; Ndacelwa ukuba ndikhuliswe kwaye yonke into ihamba kwakhona.
Imfazwe yokufa iye yaba ne-TimThumb script, efuna ukulungiswa kwamalungelo kwi-wp-content kunye namanye amafolda kwi-template ye-Arthemia (iskripthi kunye ne-cache). Ekugqibeleni emva kokufunda kwiiforam ezininzi, ukugubungela ngokungadingekile, oko kwakukho konke okukhoyo. Kubonakala sengathi ukuhamba ukusuka kwi-WP MU kuthintela izinto ezithile kwaye uthinte i -htaccess yayilindeleke kakhulu.
Ndiza kufuneka ndilungise i-permalinks, kuba ndatshintshile isakhiwo ukwenza izixhumanisi kunye neenjini zokukhangela ezinobungane. Kule plugin Ivumela imvume yokufuduka Yenza umsebenzi omkhulu ekuhanjisweni, kwaye xa ndifumana iphethini ndiya kubona ukuba ndiyilungisa yonke into esuka kwiziko ledatha.
Imifanekiso enobuhlobo Ndandincede kuba imifanekiso eninzi yayingenayo inkcazelo okanye ingenakunceda.
Ngoku kuza okulungileyo, ngelixa ndimele ndilandele ikhonkco eziphukileyo, kufuneka siqhubeke necebo lokucwangcisa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Hlaziya idatha enkulu kwi-WordPress
Post Next Ukunaba Urban, isihloko 2011Okulandelayo "